Ciidamada ATMIS & kuwa dowladda oo dib ula wareegay Ceelbaraf | dayniiile.com
Home WARKII Ciidamada ATMIS & kuwa dowladda oo dib ula wareegay Ceelbaraf
Ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS iyo kuwo dowladda Soomaaliya ayaa dib ula wareegay degaanka Ceelbaraf oo hoostaga degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo laba todobaad ka hor ay la wareegeen Al-Shabaab.
Ka hor la wareegitaanka degaanka Ceelbaraf Ciidamada huwanta ah ayaa waxaa jirtay inay madaafiic ku duqeeyeen degaanka, waxaana diyaaradaha kuwa Qumaatiga u kaca ee Helacopter-ka ay ku dageen Xerada Ciidamada ATMIS ee degaanka Ceelbaraf, iyaga oo aan wax iska caabin ah la kulmin.
Dadka degaanka Ceelbaraf ayaa ku waramaya in Ciidamada Millateriga Soomaaliya oo wata Gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan kana yimid dhinaca degaanka Miirtuugo ay iyana soo galeen degaanka Ceelbaraf kadib markii ay isaga baxeen Ururka Al-Sbabaab.
Maalmihii la soo dhaafay xaalad cakirnaan ah ayaa kajirtay degaanka Ceelbaraf ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana goor hore isaga barakacay badi dadkii deganaa oo ka cararay duqeymaha Ciidamada ATMIS iyo in dushooda lagu dagaalamo.
Previous articlelaamaha Amniga oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay qarixii degmada Balcad
Next articleMadaxweyne Xasan Sheekh & Madaxweynihii hore oo kulan gaar ah yeeshay
Midowga Afrika oo ku baaqay in la sameeyo qorsho looga hortagayo...
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dalka dib ugu soo laabtay Maanta kadib...
In 2021, about 60 million individuals will be internally displaced worldwide.